Mmiri Nduku (AHDB Library Library) - Potatoes News
Site na usoro njikwa mmiri iji nyocha nsonaazụ oru ngo, akụrụngwa anyị ga - enyere gị aka ikpebi mgbe na otu esi agba mmiri.
Gịnị mere anyị ji agba mmiri?
A na-etinye mmiri na kụrụ na nduku iji melite ogo na mkpụrụ. Irgba ala mmiri bụkwa ihe dị mkpa n’ibenata ọrịa dịka akpịrị. E kwesịrị itinye mmiri n'oge oge niile ma ọ bụrụ na ọnọdụ ihu igwe akọrọ chọrọ.
Nchịkọta mmiri oge mbụ
Onye na-akwọ ụgbọ ala maka oge mbụ na UK abụrụla ogo tuber, ogo nke nnabata maka skaab na-aga n'ihu na ngalaba ngwugwu na ngalaba nhazi ajụla nke ọma. Ọkpụkpụ nkịtị na-akpata Streptomyces scabiei na ihe ndị ọzọ na-akpata ọrịa Ebumnuche ụdị ndị a na-ekesa n'ọtụtụ ala. Nchịkọta mmiri n'oge oge na njikwa skaị
Njikwa mmiri oge na-aga
Njikwa mmiri oge na-aga, ka ihe ọkụkụ malitere ịmalite, bụ akụkụ ikpeazụ dị mkpa na usoro mmiri dị mma. Njikwa mmiri oge na-aga na akuku nduku
Ofdị ogbugba mmiri n'ubi
Egbe mmiri ozuzo: egbe egbe mmiri ozuzo bu uzo eji eme ya ma di onu ala.
Na-agba ọsọ na-aga n'ihu: usoro a na - emeziwanye ngwa nke ngwa mmiri, ọkachasị maka njikwa skaab, mana enwere ike igbochi ojiji n'ihi ọdịdị ala, nhazi, 'arịa ụlọ' na ụdị ala.
Ntapu / Atọ: usoro a kariri ọnụ, mana ọ nwere ike ịdị oke irè, itinye mmiri n'otu n'otu gafee nnukwu mpaghara.
Sprinkler: usoro ndị a na-ebelata ọrụ ọrụ achọrọ n'oge oge ma na-enye ịdị n'otu dị mma na ikike itinye obere ọgwụ ugboro ugboro.
Ofdị ogbugba mmiri n'ubi maka akuku nduku
Tags: ogbugba mmiri n'ubi etitiRipgba mmiri mmiriNduku ogbugba mmiri n'ubiogbugba mmiri n'ubi
Neuzen etinye 500 ihe mmetụta na mpaghara nduku
Ndi oru ugbo Romania kwuputara - Atụmatụ Nduku Atumatu nke National iji chekwaa mpaghara
Mgbanwe nke ugwu nke Norbest Farms
CGIAR Germplasm Health Units hazie Phytosanitary Awareness Week & Global Webinars na "Phytosanitary Safety maka Transboundary pesti mgbochi"